चुनाबको घटना स्मरण गर्दै गगन : नेपालको शुद्ध कम्युनिष्ट विप्लब ! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
चुनाबको घटना स्मरण गर्दै गगन : नेपालको शुद्ध कम्युनिष्ट विप्लब !
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणा पत्र स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
संसदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसद थापाले अब केपी सरकारको दिन गन्ति सुरु भएको समेत चेतवानी दिए ।उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्षमा उभिएपनि हामी प्रष्ट छौं, दुई तिहाई हाराहारी मत प्राप्त गरेर विश्वासको मत प्राप्त गर्नु हुनेछ । तर, आजबाट दिनगन्ती सुरु भएको छ ।’
चुनावी घोषणा पत्रका बाचा स्मरण गराउँदै कांग्रेस सांसद थापाले भने, ‘तपाईले भन्नुहोला, तैले हाम्रो घोषणा पत्र कन्ठ पारेर आइछन् । कन्ठ पार्ने मात्र होइन, कन्ठस्थ पारेको घोषणापत्रलाई पटक पटक संसदमा दोहोर्‍याइनेछ । अब किन्तु परन्तु केही चल्दैन । नो इफ, नो बट अब परीणाम चाहिन्छ, त्यो पनि उधारो होइन, नगदमा ।’
उनले चुनाबको बेला आफु माथि भएको आक्रमणको स्मरण गर्दै भने , नेपालका सबै भन्दा शुद्ध कम्युनिष्ट विप्लबले मेरो चुनाबी र्यालीमा बम पडकाउनु भयो ,नेकपा एमालेका अध्यक्षले केही कतै भन्नु भयो र मैले सुने यो बम कांग्रेशबाट नै पड्काईएको हुन सक्छ । हामीले भन्यौ चुनाबको बेला केही छैन, चुनाब को बेला जे भन्न पनि पाइन्छ ।’
तर, केपी ओली अब एमालेको अध्यक्ष होइनन् । अब नेपालका प्रधानमन्त्री हुन् ।अब जे पनि बोल्न पाईन्न । प्रत्येक चोटीको बोलिको हिसाब दिनु पर्छ ।